Handika tranonkala WordPress | Gtbabel
Dikanteny amin'ny WordPress
Ny fomba tsara indrindra hahatonga ny tranokalanao WordPress amin'ny fiteny maro: tonga lafatra ho an'ny tranokala tsotra sy sarotra. Miaraka amin'ny fanampian'ny fandikan-teny mandeha ho azy izay azonao avaozina araka izay irinao.
Adikao izao ny tranokalanao
Ny plugin fandikan-teny ho an'ny rehetra
Miaraka amin'ny fanampian'ny vahaolanay, azonao atao ny mandika ny tranokalanao WordPress amin'ny fiteny maromaro ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia ahafahanao mampitombo ny fifamoivoizana angon-drakitra iraisam-pirenena, mahatratra ny mpihaino eran-tany ary manokatra tsena vaovao: Tsy misy fandaniana avo lenta na ezaka fikojakojana. Ny vahaolanay dia manolotra fiasa mahafinaritra ho an'ireo vao manomboka sy manampahaizana izay tsy misy dikany.
Mitondra anao any amin'ny tranokala amin'ny fiteny maro samihafa ianao ao anatin'ny 5 minitra. Tsy misy fahalalana fandaharana na fanitsiana ny loha-hevitrao. Rehefa tafapetraka dia azo adika ho azy ny votoaty vaovao raha tianao: Ary afaka mifantoka amin'ny famolavolana votoaty vaovao ianao.
Mihevitra ny zava-drehetra ilaina amin'ny tranokalan'ny fiteny maro be SEO tsara indrindra: Na fandikana ny lohateny, famaritana meta, slugs, tags hreflang, toetra lava HTML: Ho faly i Google. Mifanaraka amin'ny plugins SEO lehibe ihany koa izahay.
Tena azo configurable
Ho an'ny manam-pahaizana rehetra dia manolotra fiasa toy ny fandikana XML/JSON, fampahafantarana mailaka, fandikana mailaka/PDF, fanondranana/manafatra amin'ny endrika rakitra maro, fampifanarahana amin'ny serivisy fandikan-teny isan-karazany sy ny maro hafa izay tsy misy plugin hafa eny an-tsena. .
Ireo endri-javatra izay hanentana anao
Izahay no hany vahaolana plugin manolotra fandikana mandeha ho azy amin'ny votoatinao efa misy - amin'ny tsindry bokotra iray. Ho an'ny fanovana votoaty tsirairay, ny serivisy fampahafantarana mailaka mandeha ho azy dia hampahafantatra anao ny fanovana rehetra natao tamin'ny tenin-drazana. Ary raha te-havaozin'ny masoivoho matihanina mpandika teny ianao, dia azonao atao ny manondrana ny dikanteny mandeha ho azy rehetra amin'ny endrika isan-karazany ary manafatra azy ireo indray amin'ny fipihana bokotra iray.
Ampitahao amin'ny plugins amin'ny fiteny maro hafa
Ny fisafidianana ny teknolojia mety dia zava-dehibe amin'ny vidin'ny fampandrosoana tokana sy mitohy ary ny fahombiazan'ny tetikasa, indrindra ho an'ny tetikasa tranonkala lehibe kokoa. Ny vahaolana plug-in napetraka eny an-tsena dia manana fomba fiasa ara-teknika samihafa ary manana tombony sy fatiantoka voajanahary. Ny vahaolanay dia maharesy lahatra amin'ny karazana endri-javatra maro ary manambatra ny tombony amin'ny vahaolana plugin misy eo amin'ny tsena WordPress.
Gtbabel WPML Polylang TranslatePress MultilingualPress Translate
Dikanteny mandeha ho azy
Handika pejy iray manontolo
Fiteny loharano maro
Serivisy fandikan-teny tsirairay
Framework tsy miankina
Fampiantranoana eo an-toerana
LP manokana amin'ny firenena
Sarany isan-taona isaky ny tranga (eo ho eo) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
Mifanaraka amin'ny plugins, lohahevitra ary tranombokinao
Manomboka mandika ny tranokalanao anio
Na masoivoho tranonkala, orinasa mpanao dokam-barotra, masoivoho mpandika teny na mpanjifa farany: Manana ny fonosana mety amin'ny toe-javatra rehetra ao amin'ny portfolio-ntsika izahay: Miaraka amin'ny dikan-teny maimaim-poana hatramin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa tsirairay, misokatra ho anao ny safidy rehetra - ary amin'ny vidiny tena manintona. Fidio ny fonosana mety aminao ary ampiharo amin'ny tranokalanao amin'ny fiteny maro ny fiteny ankehitriny.
Ho an'ny tranokala 1
Fanavaozana 1 taona
Mpanampy amin'ny fandikan-teny
Ny tombontsoa PRO rehetra
Fanavaozana tsy voafetra
Ho an'ny isan'ny tranonkala